Q पुरुषमा महिलाको योनीको क्रिमले स्तन वृद्धि गर्दछ ?
तपाईंले योनीको क्रीमले भन्नुको मतलब के हो ? कुनै पनि अवस्थामा, गाईकोकोमासिया (पुरुषमा स्तन वृद्धि) आनुवंशिक प्रक्रिया हो र कुनै क्रिमसँग कुनै सह-सम्बन्ध रहदैँन ।
Q तपाईंको घाँटी र काँध दुखेको बेलामा कस्तो प्रकारको आहार खाने सल्लाह दिइदैँन ?
घाँटी र काँधजस्तो शरीर दुखेको बेलामा अस्वस्थ आहार र जीवनशैली दोस्रो स्थानमा हुन्छ । आधुनिक खानाका बानीहरूले वास्तवमा शरीरमा विषाक्त पदार्थ सञ्चय बढाएर शरीरमा हानिकारक असरहरु उत्पादन गर्दछन् । यी प्रकारका खानाहरूमा निम्न कुराहरु पर्दछन्: चकलेट, आईस-क्रीम, क्याफिन भएको खाना, उच्च प्रक्रिया लगाइएको खाना, विशेषगरी एम.एस.सी. लगाइएको डिब्बामा राखिएको वा संरक्षित खाना, जङ्क फूड वा फास्ट फूड, सोडियम र चिनी उच्च भएको खाना, उच्च डेरी उत्पादन, मासु, चुरोट, रक्सी, बियर वा अन्य कुनै पनि मादक पदार्थ आदि । आहारमा यो प्रकारको खानाले तपाईंको शरीरलाई निरन्तर परिवर्तनशील तनावमा राख्दछ र उत्पादनलाई बढाउँछ र अस्वस्थ रासायनिक पदार्थ वा तपाईंको शरीरमा विषाक्त पदार्थहरूको सञ्चय बढाउँछ । यसमा दुखाई हुने संयुक्त तनाव, रिस उठ्ने र नशा तथा हड्डी मांशपेशी बटारिने हुन्छ । त्यसैले, घाँटी वा काँधको दुखाई हटाउने वा कम गर्ने स्वस्थ तरिका भनेको स्वस्थ, राम्रो पकाएको, धेरैजस्तो घरमा बनाइने र धेरै तरकारी र फलफूल सहितको ताजा खाना खानु पर्दछ ।